सपिङ गर्न दरबारमार्ग पुगेका बलिउड स्टार गोविन्दाले के किने ? – Clickmandu
सपिङ गर्न दरबारमार्ग पुगेका बलिउड स्टार गोविन्दाले के किने ?
क्लिकमान्डु २०७६ पुष १७ गते १७:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बलिउड स्टार गोविन्दा भारतमा मात्रै नभइ नेपाली दर्शकका लागि समेत मन पर्ने कलाकार हुन् । गोविन्दा अभिनय र नृत्य कुनै समय बलिउडमा मात्रै नभइ नेपाली दर्शकमाझ निकै चर्चित थियो ।
बिहीबार पनि दरबारमार्गमा टहलिएका उनी केही ब्राण्डका शोरुम चहारे र लञ्चका लागि याक एण्ड यति होटलमा पुगे । त्यहाँ उनका प्रसंशकले उनीसँग सेल्फी लि ए । र, लञ्च गरे